XOG:- Garoonka Diyaaradaha Magaalada Garoowe oo xiran - Awdinle Online
Waxaa maalintii afaraad oo xiriir ah gebi ahaan xiran Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ee Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamulka Puntland, iyadoo aysan jirin wax shaqo oo halkaas ka socota.
Sababta uu shaqeyn la’yahay Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ayaa waxaa ay tahay, kadib markii Arbacadii lasoo dhaafay uu Garoonka ka dhacay shil diyaaradeed oo ay gashay diyaaradda AirDjibouti.
Ilo-wareedyo ayaa sheegaya in diyaaradda oo ku dhacday dhabaha ay Cagadhigtaan diyaaradaha ee Garoonka Garoowe ay taallo diyaaradda AirDjibouti, isla markaana aan halkaas laga qaadin, sidaasina loo xiray Garoonka oo aysan wax duulimaadyo oo ka jira.
Sidoo kale waxaa la tilmaamay in Garoonka diyaaradaha Puntland ee Garoowe oo leh hal dhabe ama hal run-way ay dhex-taalo diyaaradii ku dhacday, xili ay dooneysay in ku degto, ayna u bixi waayeen lugaha, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay qeybta dambe.
Ma jirin wax khasaaro nafeed oo ka dhashay diyaaradda AirDjiboutil ee ku dhacday Garoonka Gen. Maxamed Abshir, isla markaana waxaa saarnaa 34 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale, iyadoona duuliyihii waday uu ku guuleystay inuu si xirfadeysan u dejiyo, waxaana markii horey ay ka timid Magaalada Hargeysa.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo sheegay in boob lagu haayo hantida Qaranka
Next articleGuddiga doorashooyinka lagu muransan yahay oo Guddoon doortay